Saxafiyad Caan ah & Saygeeda oo ku geeriyooday Qaraxii magaalada Kismaayo & War cusub oo laga helay. | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Saxafiyad Caan ah & Saygeeda oo ku geeriyooday Qaraxii magaalada Kismaayo & War cusub oo laga helay.
Ciidamada Amniga ayaa weli la tacaalaya dableyda Alshabaab weerarka ku gashay Hotelka Cas-casey ee bartamaha magaalad Kismaayo.
Afhayeenka Hay’adaha Amniga Jubbaland ayaa sheegay in weerarka lasoo afjaray, balse xaaladda ayaa u muuqata inuusan weli howlgalku dhammaan, waxaana wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa sheegayaan in weerarka hotelka Cas-casey ay ku dhinteen dad dhowr ah oo ay ka mid tahay haweeney saxafiyad caan ah iyo saygeeda.
Hodon Naaleeye iyo Saygeeda Fariid Jaamac ayaa ku geeriyooday qaraxa iyo weerarka lagu qaaday Hotelka. Hodon ayaa ahayd saxafiyad Muuqaallada duubta -Youtuber, waxayna sameyn sameyn jirtay muuqaaladda horumarka dalka iyo is-dhexgalka bulshada, iyadoo saygeeda uu ahaa ganacsade iyo wasiir hore oo ka tirsanaa maamulka Puntland.
Waxaa kaloo hotelka ku dhintay Musharax Maxamed Siciid oo ka mid ahaa musharixiinta maamulka Jubbaland, nabadoon iyo weriye Maxamed Sahal Cumar (Gacmadheere), iyadoo sidoo kale lasoo werinayo dad dheeraad ah oo weerarka ku dhintay.
Qasaaraha ayaa ah in badan 7 qof oo dhimasho ah iyo dhaawaca 15-kale, waxaana weli soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan qasaaraha weerarkii Hotelka Cascasey ee magaalada Kismaayo.
Previous articleFAAHFAAHIN: Weerarkii Kismaayo oo weli socda, Senator la beeniyey inuu ku dhintay & Weriye lagu dilay.
Next articleRa’iisal wasaare Kheyre oo War kasoo saaray Weerarka ka dhacay magaalada Kismaayo.